Javier Pastore oo ka hadlay halka uu ku dambeynayo mustaqbalkiisa ciyaareed
Friday, December 14th, 2018 - 01:24:17
Tuesday December 26, 2017 - 08:27:19 in Wararka by Hussein Hadafow
Javier Pastore ayaa been ku tilmaamay wararka sheegaaya in ciyaaryahaanada ee isku kooxda yihiin uu macsalaameeyay.
Ciyaaryahaanka kubad sameeyaha ah ayaa la sheegay kooxdiisa inuu iskaga tagi dooni tan iyo markii PSG ay soo caga-dhigteen labada xidig ee duniga ugu qaalisay ee kala ah Neymar iyo Mbappe.
Kooxaha Liverpool iyo Inter Milan ayaa xiiso xoogan u muujiyeen xidigaan xili halyeeygii hore ee kooxda United Eric Cantono oo u arko Pastore inuu yahay dooqa saxda ee United u xiran lahaa lambarka 7-aad.
"Waa been inaan macsalaameeyay ciyaaryahaanada isku kooxda nahay. Waxaan mar waliba ka fikiraayay inaan u ciyaaro kooxdaan isla markaana aan u sameeyo wax walboo wanaagsan oo aan awoodo" ayuu Pastore u sheegay Mundo Deportivo.
"Kulumadii dhawaa. Wax badan baan ciyaaray. Waan faraxsanahay. Wali waxaan haysataa sanad iyo bar oo qandaraaskayga kaharsan. Aad ayaan ugu riyaaqsanahay. Waxaan aniga rabay inaan waqti badan ciyaaro. Midaasi waa run. Macllinka ayaa go'aan ka gaari doono. Waa inaan isa sii hubiyaa isla markaana horemar sameeyo si waqti badan ugu ciyaaro PSG."ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay Pastore.